Workshop with Supreme Court on UK Leveson – Free Expression Myanmar
Jul 01, 2017 by Coordinator	in Projects and research စီမံကိန်းများ နှင့် သုတေသန
Supreme Court justices and staff were interested in the experience of the UK government and the investigation into media regulation by the senior judge Leveson.
UK licencing ended in 1695 to promote free media. Only general laws e.g. defamation.
Accusation of “Power without responsibility” in phone-hacking scandal.
Leveson was 6th inquiry into media since 1945. Purpose to recommend better regulation.
International standards say meaningful self-regulation.
Statutory / co-regulatory systems may be compatible with int. standards if strong guarantees for media freedom / regulatory independence.
Leveson: Options considered
Self-regulation: Run by newspapers.
Independent regulation: Mixed including civil society. Not editors.
Judicial regulation: Judges oversee independent regulator.
Statutory underpinning: Reduced awards for members of independent regulator.
Statutory regulation: Myanmar model.
Independent self-regulatory body with statutory underpinning. Free from industry or government.
First amendment-style law to protect free media.
Self-regulatory body with powers to investigate. Fair, quick and inexpensive complaints mechanism. Vexatious claims struck.
If newspapers don’t join self-regulatory body, should be regulated by Broadcast regulator.
Leveson: How would Myanmar implement?
Printing and Publishing Law repealed.
Strengthen journalists’ rights (Art. 4-8).
Remove content regulation / code of conduct (Art. 9, 25, 26).
Remove government role in nominating Press Council members (Art. 12-24).
ယူကေသည် လွတ်လပ်သောမီဒီယာကို မြှင့်တင်ပေး ရန်အလှိ့ငှါ လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုကို ၁၉၆၅ တွင် ရပ်နား ခဲ့သည်။ အသရေဖျက်မှု ကဲ့သို့သော ယေဘုယျ ဥပဒေသာရှိသည်။
ဖုန်း Hacking အရှုပ်တော်ပုံရှိ “တာဝန်ယူမှု ကင်းမဲ့သော အာဏာ” အား စွပ်စွဲခြင်း
Leveson သည် မီဒီယာထံသို့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၆ ကြိမ် မြောက် စုံစမ်း မေးမြန်းမှုဖြစ်သည်။ ပို၍ကောင်း မွန်းသော စည်းမျဉ်းများထောက်ခံအကြံပြုရန် ရည်ရွယ်သည်။
အဓိပ္ပယ်ရှိသော မိမိကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းရေးလုပ် ငန်းဟု နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမှ ထောက်ပြသည်။
ပြဋ္ဌာန်းချက်/ တွဲဖက်-စည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းရေးစနစ် သည် မီဒီယာလွတ်လပ်မှု/ စည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းရေး လွတ်လပ်မှုအား ခိုင်မာစွာ အာမခံချက်ရှိမှသာလျှင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကောင်း ရှိနိုင်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းရေး ။ ။ သတင်း စာများမှ ဆောင်ရွက်
လွတ်လပ်သောစည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းရေး ။ ။ အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အယ်ဒီတာ များမဟုတ်။
တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း။ ။ တရားသူကြီး များက လွတ်လပ်သော စည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းသူ များကို ကြီးကြပ်သည်။
ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်း။ လွတ်လပ်သောစည်းမျဉ်းထိန်းကျောင်းသူများ အတွက် ဆုချီးမြင့်မှုများ လျှော့ချခြင်း
ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာပုံစံ
ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျော်ထောက် နောက် ခံပြုသည့် လွတ်လပ်သော မိမိကိုယ်တိုင် ထိန်းကျောင်းရေး အဖွဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အစိုးရ မှ လွတ်လပ်မှုရှိသည်။
လွတ်လပ်သောမီဒီယာအာ ကာကွယ် စောင့် ရှောက် ရန် ပထမ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု-ပုံစံ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအခွင့်အာဏာရှိသည့် မိမိ ကိုယ်တိုင် ထိန်းကျောင်းရေးအဖွဲ့။ မျှတမှု၊ မြန်ဆန်မှု၊ အကုန် အကျနည်းပါးမှုတို့ရှိသော တိုင်ကြားမှုယန္တရားများ။
သတင်းစာတိုက်များသည် မိမိကိုယ်တိုင်ထိန်း ကျောင်းရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ချတ်ဆက်မှု မပြုပါက၊ ရုပ်မြင်သံကြားစည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးဖြင့် ထိန်ကျောင်းမှုပြုသင့်ပါသည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းရန်။
ဂျာနယ်လစ်များ၏အခွင့်အရေးကို အားဖြည့်ပေးခြင်း (အပိုဒ် ၄-၈)
သင်တင်း content စည်းမျဉ်းများ/ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ အား ဖယ်ရှားခြင်း (အပိုဒ် ၉၊ ၂၅၊ ၂၆)
သတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ တွင် အစိုးရမှ အဆိုပြုခန့်အပ်သည် အခန်းကဏ္ဍ ဖယ်ရှားခြင်း (အပိုဒ် ၁၂-၂၄)